कास्कीको बीरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म विश्वकै लामो केवलकार बन्ने -
नेपालमा विश्वकै सबैभन्दा लामो यात्रुवाहक केवलकार बन्ने भएको छ । मुक्तिनाथ केबलकार प्रा. ले उक्त लामो केवलकार कास्कीको बीरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म निर्माण गर्न लागेको हो ।
नेपालकै इतिहासमा नेपाली निजी क्षेत्रको मात्र जारी पूँजी लगानीमा निर्माण हुन लागिरहेको केवलकार ८४.१ किलोमिटर लामो हुनेछ । यही केवलकार निर्माणको लागि सर्बेक्षण गर्नका लागि अष्ट्रेलियाको जहाज ४ दिन लगाएर नेपाल आइपुगेको छ ।
यो संगै अब केवलकारको डीपीआरको काम थालिनेछ । डीपीआर तयार गर्नका लागि नै जहाजमा आवाश्यक पर्ने उपकरण जडान गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । साथै जहाज उडाउँनका लागि पनि अनुमती लिने काम भईरहेको मुक्तिनाथ केबलकार प्रा. लिले जनाएको छ ।